Wiil yar oo nafta looga qaaday in uusan laylis ka shaqayn - BBC News Somali
Wiil yar oo nafta looga qaaday in uusan laylis ka shaqayn
23 Nofembar 2018
Image caption Booliiska Faransiiska ayaa dilka wiilka yar u qabtay afar ruux oo qoyskiisa ah
Afar ruux oo isku qoys ah ayaa la xiray ka dib markii wiil sagaal jir ah uu u dhintay jir dil loogu gaystay gurigooda oo ku yaalla magaalada bariga Faransiiska ku taalla ee Mulhouse.
Ilo booliiska ka tirsan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in wiilku uu diiday in uu ka shaqeeyo laylis ka dibna ul buuran lala dhacay.
Gabadh ay walaalo yihiin wiilka dhintay, wiilkii ka wayn iyo gabadh kale ayaa guriga joogay marka ay arrintaasi dhacaysay.
Inkastoo aysan hooyadii meesha joogin haddana xabsi ayaa la dhigay, oo waxay ka warhaysay waxa meesha ka socda, sida ay wararku sheegayaan.
Amiiradda Dubai Sheikha Latifa oo la la'yahay
"Boqol qof ayaan dilay, kamana shallaynayo"
Dhimashada wiilkan ayaa dhacday saacadihii hore Axadda, tacsi ayaana looga dhigay magaalada Mulhouse, dadka deegaanka oo mudaaharaadayana waxay ku dul wareegeen guriga waalidka dhalay wiilka yare ee dhintay.
Wixii markii hore ay waalidku sheegeen in wiilku eersaday iyo dhaawacyo lagu arkay maydkiisa oo baaritaan lagu sameeyay ayaa booliisku ku qaaday in ay baaritaannada sii wadaan, sida uu qoray webtise wax ka qora arrimaha hidesidaha oo la dhoho Alsace DNA.
Inkastoo uu wadnahu istaagay wiilka haddana khuburo baaritaanno ku sameeya maydadka ayaa sheegay in wiilku uu eersaday wax lagu dhuftay, sida uu website-kaasi sheegay.
Booliiska ayaa laga soo xigtay in shay lagu dhuftay wiilka.
Hooyadii ayaa guriga ka maqnayd oo safar ganacsi ah jirtay balse si joogto ah ayay u dhiiri galin jirtay in la ciqaabo, iyada oo arrintaas ku sababaysay in uusan rabin in uu ka shaqeeyo laylis-yada loo soo diro, sida ay ku warrantay warbaahinta Faransiiska.
Afar ruux oo qoyska ka tirsan ayaa Khamiistii la dhigay xabsi ku yaalla magaalada Mulhouse, waxayna ka soo hor muuqan doonaan dacwad ooge ka hor inta aan maxkamad loo gudbinin.
Inkastoo dilka looga shakisan yahay wiil ka wayn oo 19 jir ah haddana baaritaannada ayaa lagu doonayaa in ay daaha ka rogaan waxyaabo badan oo masiibadan la xiriirta.
Dilka wiilkan yar ayaa imanaysa wakhti baarlamaanka Faransiisku uu ka doodayo in la mamnuuco in carruurta qacan qaad lagu ciqaabo.